Ahoana no mamantatra ny fizahana GPS na ny fitaovana fihainoana amin'ny fiara | Singapore Top Mini GPS Tracker manokana ho an'ny autism / Autistic Kids & Dementia Anti-panahy
Ny rafitra toerana misy eo amin'izao tontolo izao (GPS) sy ny fitaovam-pihainoana dia fanovana kely kely izay afaka manampy anao hitsikilo ny fiainana amin'ny fotoana mitovy amin'izany, ireo mpifahavalo mety hitranga dia afaka mampiasa azy ireo hitsikilo anao koa. Ireo fitaovana ireo dia natao ho kely loatra ka azo afenina mora ao anatiny na ivelan'ny fiara raha tsy mahazo ny sain'ilay olona lasibatra. Milalao ny anjara asan'ny Trojan Horse izay alehan'ny fahavalonao ny fanavaozana tanteraka ny hetsika ataonao tsy amin'ny alàlan'ny toerana misy anao ihany, fa mihaino koa izay lazainao, iza no hiresahanao ary inona no drafitra ho anao amin'ny alàlan'ny horonam-peo fitaovana fihainoana. Noho izany, mba hahazoana antoka fa hiainga ho any amin'ny toerana misy anao ianao nefa tsy voafehy na mitondra fitaovana fihainoana miafina, ho azo antoka fa mitady ireo zavatra voalaza etsy ambany ianao fa hanao fitaovana fanaraha-maso hita maso tsy hita na tsy hita toy ny GPS sy fitaovana fihainoana mifoha. eo imasonao tena haingana.
Ny fitaovana voalohany azonao tadiavina dia SPY Camera RF detector. Vokatra mihoa-pampana mahavariana izay manampy anao tsy hahita ny GPS tracker ihany fa ny fitaovana video tsy misy alàlan'ny fitaovana sy ny fihainoana feo koa. Mora ny mitondra, dia afaka mividy iray ianao ary mijanona miaraka aminao ao anaty fiara sy manara-maso tsy tapaka ny fiaranao. Ho fanampin'izany dia miaraka amin'ny bateria 1500 MAH izay mahatonga ity fitaovana ity miasa hatramin'ny ora 15 mahitsy, ka tsy mila mandoa an'io fitaovana io ianao. Izy io koa dia efa misy fampandrenesana voaorina izay ho mavitrika rehefa akaiky ny fitaovana ny GPS tracker, fakantsary miafina na fitaovana mihaino. Ny sakam-peo mety ho hita dia ny 1MHZ TO 8000MHZ izay saika hahitan-doza ny andiany rehetra ao anaty fiara.
Ity vokatra ity dia afaka manao asa maro ho anao, afaka mahita ny onjam-peo, ny zotra magnetika, ny fakantsary tariby manana tariby na tsy misy tariby. Fitaovana matihanina feno izay afaka manampy anao hahita fa feno ny bàlanao na tsia. Manana fandidiana tsotra izy io, na iza na iza afaka mampiasa mora iny vokatra iny ary mora entina ihany koa azonao apetrakao ao anaty fiara na mitazona ao am-paosinao. Izy io dia manana feo fanairana sy fanamafisam-peo izay midika fa rehefa mikaroka ireo fitaovana fitsikilovana ianao, ary afaka misafidy eo anelanelan'ny feon-peo na fanamafisam-peo, dia hihetsika izany rehefa tonga eo akaikin'ny fitaovana mpitsikilo ianao.
(SPY999): Mpikambana fonosana fakantsary mpitsikilo miafina fanaraha-maso
Ity vokatra matihanina mahavariana ity dia sarotiny tanteraka, manana toky azo zahana ary mahavita manara-penitra amin'ny fitaovana lehibe. Manana kofehy iray sy fehezin'ny fihetseham-po ihany izy, izay manamora ny fampiasana vokatra, afaka mamantatra ireo karazana fitaovana miafina toy ny fakantsary miafina, GPS tracker ary fitaovana fihainoana. Rehefa mikaroka ny fiaranao ianao dia manome anao ny iray amin'ireo fiasa lehibe anananao ity fitaovana ity, ny tondro jiro izay hilaza aminao ny tanjaka famantarana ka rehefa miakatra amin'ny fitaovana fitsikilo ianao dia hampiseho aminao ny lalana tsara sy manana rafitra fanairana izy io. tsara dia manomboka maneno izy rehefa tonga eo akaikin'ny fitaovan'ny mpitsikilo miafina. Ankoatr'izay dia manana bateria 800 mah io manome anao aina aina hatramin'ny ora 15, ka tsy mila manahy momba ny manangona foana ianao.
Ho fehiny, mila miaro ny fiainana manokantsika amin'ny fanafihana ny hafa isika, ao amin'ny tontolo iray izay mandroso ny teknolojia isan'andro ny olona dia mahita fomba ratsy indrindra hampiasa ireo fanavaozana ny vanim-potoana maoderina ireto ary izany no antony anoloranao an'io lahatsoratra io anao hafa hafa azonao ampiasaina. hiarovana ny toerana ivonanao amin'ny olona ratsy fanahy.
11021 Total Views 1 Views Today